Muddo Kordhinta Soo Foolka Leh - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
W/Q. Xildhibaan Cabdiraxmaan Yusuf Cartan
Muddo Kordhinta Golayaasha Sharci Dejinta ceebteena qudha ma noqone caado ayay noqotay. Haddii shay qalloocan oo aan maslaxadda dalka ka tarjumayn la caadaystona xumaan dheeraad ah baa ka dhalata. Kolkaa dabaqadda siyaasadeed ee Somaliland waa inay ka feejignaataa khataraha la xidhiidha muddo kordhin la caadaysto.
Sumcadda Somaliland laba shay bay ku xidhnayd labadaas oo ah NABADDA iyo DIMUQRAADIYADDA.
waana laba shay oo isku xidhan, haddii dimuqraadiyad la waayo, nabadi jiri mayso, haddii nabad la waayona dimuqraadiyadi jiri mayso qaab kale oo aynnu isku xukuno oo heshiis lagu yahayna ma muuqdo.
Waqtiga xaadirka ah, muddo kordhinta Golayaasha Sharci dejintu waa INA-DAAN-WEYNE ee maxaa XAL ah?
Ma anfacayso in sidii hore u dhici jirtey Golyaasha sharci dejinta loogu deeqo muddo kordhin daw darro ah oo bilaa shuruud ah.
Horena waa looga ilduufaye, Markan muddo kordhinta waa inay ku lammaan yihiin shuruudo adag oo waqtiyeysan oo ay golayaasha sharci dejinta iyo fulintu ku tallaabsanayaan si doorashooyin xalaal ahi u qabsoomaan dabayaaqada mudda kordhintu.
Qodobada degdegga ah ee doorashada suuragelinya waa:
curinta xeerka doorashada Golaha Wakiilada
Curinta Xeerka xulashada golaha guurtida
dib-u-eegista xeerka xisbiyada siyaasadeed
mideynta Doorashooyinka madaxtooyada iyo wakiilada
xal u helidda tabashooyinka Saami qaybsiga ka hore inta la samaynayo tirokoob heer qaran ah.
Diyaarinta qodobada kor ku xusani waa inay waqtiyeysnaadaan oo jedwal qeexani u yaal, sidoo kale, meel marintoodana waa inay waqtiyeysan yihiin oo jedwal cad oo ummaddu ku talo gashaa u yaal.
Hoggaamint iyo Fulinta arrimahaas kor ku xusan waxa u xil saaran madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland.
Muddo kordhini timiye, ha laga diyaargaroobo oo yaanay noqon sidii kuwii hore ee bilaa shuruudda ahaa ee u ekaa in shaqo xumida laysku gunnaynayo (abaal marinayo).